September 27, 2013 – democracy for burma
ASIA SECURITY INITIATIVE Ceasefires sans peace process in Myanmar: The Shan State Army, 1989-2011”
On September 27, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
MYANMAR: Burmese government soldiers killacivilian and rapea29-year-old mother
CREDIT KACHIN LAND
A 62-year-old local Chinese man was killed by Burmese army’s 241st Light Infantry Regiment (LIR) soldiers on the way between Mai Hpang village and Mungpaw in northern Shan State on Sept 25 at 8:30 pm. Kyan Shauk Wan,anative of Mai Hpang village, was on his way to sell bamboo shoots at Mungpaw market when he encountered government soldiers. Kyan Shauk Wan was shot as he tried to run away from government soldiers.
In northern Kachin State, Burmese army’s 137th LIR soldiers rapeda29-year-old mother of an infant baby at Nhka Ga village in Machanbaw. Local sources reported in the last week of August that Burmese army’s 66th Light Infantry Division (LID) soldiers arrested several Nhka Ga village women and gang raped them atanearby forest. Nhka Ga villagers are still hard to be reached as Burmese government soldiers builtafence around the village and they are currently unable to go outside their own village.
A local source saysagroup of local ministers and representatives from Kachin Baptist Church (KBC) have been permitted by Burmese army’s local Battalion commander on Thursday to visit Nhka Ga village for one night. Local ministers and KBC have made several requests to local commanders for access to Nhka Ga village since early September. This will be the first trip by outsiders to Nhka Ga village afteraseries of battles fought between KIA’s 7th Battalion and Burmese army’s 7th Battalion in the last week of August.
Nhka Ga villagers are in dire need of help as their homes were ransacked and livestock looted by Burmese government soldiers. Pastor Ram Mai,alocal Baptist minister who was severely beaten and tortured by government soldiers, is still deprived of required medical treatment.
MYANMAR BURMA :KIO,Government to meet as precondition to highest-level peace talks
Myanmar’s government and the Kachin Independence Organization (KIO) are scheduled to meet in Myitkyina, Kachin State on October 2-3 to discuss four key issues, according to the Myanmar Peace Center (MPC).
The preliminary meeting will precede three days of union-level peace talks between leaders from both sides beginning on October 7.
“Before the talks between leaders from both sides, technical teams will first discuss and coordinate issues such as what the problems are and how the two sides can cooperate and negotiate. The talks are most likely to take place from October7to 9. Leaders of the KIO, the government, and the military will attend the talks,” said the MPC’s Aung Naing Oo.
A member from the Peace Creation Group (PCG), which serves asapeace negotiator between the government and KIO, told The Daily Eleven the meeting would focus on four main points.
“The preliminary meeting will focus on the positioning of troops, the formation of monitoring groups, the resettlement of refugees and the nationwide ceasefire issue,” said Hsan Aung of the PCG.
He added that the KIO’s participation in the nationwide ceasefire, which the government expects to reach in October, is only likely if the government, Parliament and the military provide political and military guarantees.
“For the KIO to get involved in the nationwide ceasefire, the important thing is trust. There must be political and military guarantees. That cannot be decided by the government alone. I think the KIO wants those guarantees from the government, Parliament and the armed forces,” said Hsan Aung.
KNU ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဌာန ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၁၅ချက် ချမှတ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း
KIC : KNU ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဌာန ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၁၅ချက် ချမှတ်
စက်တင်ဘာလ ၂၇ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)၏ ဗဟို ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဌာနက စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့တွင် အစည်းအ ဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့ပြီး ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အချက် ၁၅ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအစည်းအဝေးကို KNU ဖားအံခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၇)နယ်မြေရှိ လေးဝါးစခန်းတွင် စက်တင်ဘာလ ၂၃မှ ၂၅ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့(Karen National Police Force-KNPF) ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက် ဖျက်ရေး အပါအ၀င် အချက် ၁၅ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း KNU ပြည်ထဲရေးဌာနတာဝန်ခံ ပဒိုစောအားတိုးက ပြော သည်။
“အစည်းအဝေးမှာ KNPF ကို စနစ်တကျ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့၊ အရေးကြီးတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအ ပြင်ကို တခြားရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ဖို့ စတာတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပဒိုစောအားတိုးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောဆိုသည်။
သုံးရက်တာပြုလုပ်သော ၎င်းအစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များထဲတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ KNPF တပ်ဖွဲ့ ၀င်များ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး၊ တနှစ်တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူနိုင်ရေး စသည့် အဓိကကျသော အချက်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုပြုလုပ်သည့် အစည်းဝေးတွင် KNU ခရိုင်နှင့် တပ်မဟာ(၇)ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအ၀င် KNU ပြည်ထဲရေးဌာနမှ တာဝန်ခံ ပဒိုစောအားတိုး၊ KNPF ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးစောလယ်ဝေါ့၊ ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်(KNDO) စစ်ဦးစီး ချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးနယ်ဒါးမြ၊ ဗဟိုတရားသူကြီးချုပ် ပဒိုစောဒေါ့လေးမူ စသည့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် ၆၀ကျော် တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
KNU ခရိုင်နှင့် တပ်မဟာ(၇)ခုအတွင်း၌ ရာဘဆေးပြား (ခေါ်) စိတ်ကြွဆေးများ၊ ဆေးခြောက်များကို သုံးစွဲမှု၊ ရောင်းဝယ်ဖောက် ကားမှုများ သိသာစွာ ကျယ်ပြန့်လာပြီး ကေအဲန်ယူ ဖားအံခရိုင်နှင့် ဒူးပလာယာခရိုင်များတွင် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပွားနေကြောင်း KNU ဗဟိုတရားသူကြီးချုပ် ပဒိုစောဒေါ့လေးမူက ပြောဆိုသည်။
ပြည်ထဲရေးဌာနတာဝန်ခံ ပဒိုစောအားတိုးကလည်း “ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် KNPF က လုပ် ဆောင်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လုံးဝကို ပပျောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ အားလုံးက ပူးပေါင်းပါ ၀င်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ KNPF ကို ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ KNU ဌာနချုပ်ဟောင်း မာနယ်ပလောတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုအ စည်းအဝေးကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြန်လည်ကျင်းပလာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
OIC Foreign Ministers group to visit Myanmar-OIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအဖွဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ဆွေးနွေးရန် မြန်မာနိုင်ငံလာမည်..
On September 27, 2013 September 27, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
cashmir watch Hameed Shaheen
RAWALPINDI – OIC Ministerial Contact Group on Rohingya Muslims minority meeting on Wednesday (today) in New York on the sidelines of the 68th session of the UN General Assembly, decided to sendahigh level ministerial group to be led by the OIC Secretary General Prof Ekmeleddin Ihsanoglu soon, says an OIC message emailed to Kashmir Watch.
The meeting noted the government of Myanmar’s positive response to OIC’s request to arrange foravisit by the Secretary General andaministerial delegation of the Contact Group on Rohingya to Rakhine State and other areas where Muslims live in Myanmar.
The Contact Group expressed the importance of formingaunited opinion and coordinating initiatives expeditiously and overalong period of time. It decided to table an OIC sponsored resolution specific to Myanmar to the UN General Assembly at the 68th Session.
In his statement to the meeting, OIC Secretary General Ekmeleddin Ihsanoglu urged the member countries to push forward with their efforts to enhance active communication with the international community to implement the Makkah Summit recommendations. He expressed willingness to coordinate positions for the provision of the support needed to improve the situation of Muslims in Myanmar in order for them to recover all their legitimate rights and return to their land.
Director General of the Arakan Rohingya Union (ARU) Dr. Wakar Uddin also spoke at the meeting and gave an account of the latest developments in Arakan and his participation inaUS congressional hearing about Muslim minorities in Myanmar last week, which was facilitated by the OIC.
The meeting called upon the OIC Secretary General to actively follow up the situation of the Rohingya Muslim minority in Myanmar within the implementation of the resolution adopted at the 4th Extraordinary Summit held in Makkah Al-Mukkaramah. The meeting also called upon OIC Member States and OIC financial institutions to contribute generously to the Rohingya Minority in Myanmar to ensure the return of the internally displaced persons and refugees to their homeland and construction activities in Rakhine State.
The meeting called upon the government of Myanmar to findalasting solution to the plight of the Muslim Rohingya minority, including their legal status and birthrights.
OIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအဖွဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ
အစ္စလာမ္မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်သော OIC ၏ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး
များအဖွဲ့သည် မြန်မာ နိုင်ငံသို့လာရောက်ရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့လာရောက် မည့် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ်က ”OIC အဖွဲ့ လာမယ်
ဆိုတာတော့ သိပါတယ်။ သူတို့တွေ လေ့လာ ချင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ ဒီဘက်က
ခွင့် ပြုနိုင်တဲ့နေရာတွေအတွက် ညှိ နှိုင်းဆဲပဲရှိ ပါသေး တယ်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေ
တော့ မသိသေး ပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ၂၅ရက်က ကျင်းပခဲ့သော OIC အဖွဲ့၏ ရို ဟင်ဂျာမူဆလင် လူနည်းစု
ရေးရာ အစည်း အဝေးတွင် OIC ၏ အတွင်းရေး မှူးချုပ် ပါမောက္ခအက်နီလတ် ဒင်အီဆာနိုဂလူ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ကို မြန်မာ နိုင်ငံသို့စေလွှတ် ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ကြကြောင်း သိရ သည်။OIC အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ဒေသနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ မူဆလင်များရှိရာ အချို့သောနေရာများသို့
သွားရောက်ရန် အစီ အစဉ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြား ရေးတာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်က ”OIC လာမယ့်ကိစ္စ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘာမှမသိ ရဘူး။
သေချာတာတစ်ခုက OIC ကို ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်လူမျိုး တွေက လုံးဝလက်မခံဘူး
ဆိုတာ တော့ သိတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ် သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝ မသိရတာပါ”ဟု ပြောသည်။
မူဆလင်များ၏အခြေအ နေကို တိုးတက်မှုရှိစေရန်အတွက် အကူအညီပေးအပ်သည့်
နေရာ တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းOICအတွင်း ရေးမှူးက
ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံအခြေစိုက် Kshmir Watch သတင်းဌာနတွင်
OIC အဖွဲ့သည် နိုင်ငံပေါင်း ၅ဝကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ယခင် က မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံးကို ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့မှု များရှိခဲ့သော်လည်း ပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်မှုကြောင့် နိုင်ငံ တော်သမ္မတက OIC ရုံးကိုဖွင့်လှစ် ခွင့်မပြုဟု ၂၀၁၂ခုနှစ် အောက် တိုဘာလအတွင်း သတင်းထောက် များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်